သမီးငယ် မစ်မစ်လေးရဲ့ မွေးနေ့အတွက် အဝေးတစ်နေရာကနေ ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ ဖေဖေ R ဇာနည်…. – Cele Oscar
သမီးငယ် မစ်မစ်လေးရဲ့ မွေးနေ့အတွက် အဝေးတစ်နေရာကနေ ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ ဖေဖေ R ဇာနည်….
May 14, 2021 By L YC News
တေးသီခငျြး မြားကို အကောငျးဆုံး သီဆို နိုငျသူ ကတော့ အဆိုတျော R ဇာနညျပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူ့ရဲ့ သီခငျြးမြား စှာ ကလညျး ပရိသတျတှေ ကွားမှာ နာမညျကွီးရပေနျးစားနေ တာ လညျး ဖွဈပါတယျ။ သူဟာ ဆယျစုနှဈ ကြျောတိုငျအောငျ ဂီတ လောက မှာ အောငျမွငျမှု တှရေရှိထား သူတဈဦး ပဲ ဖွဈပွီး ပွနျဆို တေးမြားပွနျလညျ သီဆို ရာတှငျလညျး ပရိသတျ တှရေဲ့ တဈခဲနကျ အားပေးမှု တှကေို ရရှိ ထားတာလညျး ဖွဈပါ တယျ။
သီခငျြးတှေ နဲ့ အလှမျး ဝေး ခဲ့တဲ့ အဆိုတျော R ဇာနညျက ဂီတ လောက ထဲကို တဈဖနျ ပွနျရောကျလာ ခြိနျမှာ လညျး အမာခံ ပရိသတျ တှရေဲ့ အားပေးမှု တှနေဲ့ သီခငျြးတှေ အကောငျးဆုံး ဖနျတီးနနေိုငျ သူတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။ ယခုဆိုရငျ ပြျောရှငျစရာ ကောငျးတဲ့ မိသားစု ဘဝလေးကို ပိုငျဆိုငျ ထားပွီး ပရိသတျတှအေားကြေ နရတဲ့ မိသားစု လေး ဖွဈပါတယျ။
သူကတော့ လှုပျရှားမှု ပုံရိပျလေး တှကေို အမွဲဆိုသလို ဖဘှေ့တျ စာမကျြနှာ ပျေါတှငျ ဖျောပွလေ့ ရှိတာလညျး ဖွဈပါတယျ။အခုလညျး မဈမဈ လေးရဲ့ တဈနှဈပွညျ့ မှေးနေ့ လေးကို အဝေးကနပေဲ ဆုတောငျး ပေးရငျး သမီးလေး ဘေးနား မှာ အတူမရှိ နိုငျတာကွောငျ့ စိတျမ ကောငျးဖွဈ မိကွောငျးရေးသား ဖျောပွ လာပါတယျ။ ” Happy Birthday သမီးငယျ မဈမဈ လေး သမီးရဲ ပထမဆုံး တဈနှဈပွညျ့ မှေးနမှေ့ာ ပါပါး သမီး နဲ့ အတူရှိမနေ နိုငျတာ sorry ပါနျော။ ပါပါးသမီးလေးကိုအရမျးလဲလှမျးတယျ။ အရမျးလဲခဈြတယျနျော။ သမီးလေး မဘေုနျးဇာနညျ တဈနှဈပွညျ့မှ နှဈပေါငျးမြားစှာ မိသားစုနဲ့ ပြျောရှငျစှာ ဖွတျသနျးနိုငျပါစေ။ ကိုယျကနျြးမာစိတျခမျြးသာ ပွီး ဘာသာသာသနာအကြိုး လူသား အားလုံးအကြိုးကို ကောငျးမှနျစှာ ထမျးဆောငျ နိုငျပါစေ လို့ ပါပါးဆုတောငျး ပေးပါတယျ l love you Baby “ဆိုတဲ့စာလေးဖွဈရာ ပရိသတျကွီး အတှကျ ပွနျလညျ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
Photo – Zarni Myonyunt
တေးသီချင်း များကို အကောင်းဆုံး သီဆို နိုင်သူ ကတော့ အဆိုတော် R ဇာနည်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ သီချင်းများ စွာ ကလည်း ပရိသတ်တွေ ကြားမှာ နာမည်ကြီးရေပန်းစားနေ တာ လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ဆယ်စုနှစ် ကျော်တိုင်အောင် ဂီတ လောက မှာ အောင်မြင်မှု တွေရရှိထား သူတစ်ဦး ပဲ ဖြစ်ပြီး ပြန်ဆို တေးများပြန်လည် သီဆို ရာတွင်လည်း ပရိသတ် တွေရဲ့ တစ်ခဲနက် အားပေးမှု တွေကို ရရှိ ထားတာလည်း ဖြစ်ပါ တယ်။
သီချင်းတွေ နဲ့ အလှမ်း ဝေး ခဲ့တဲ့ အဆိုတော် R ဇာနည်က ဂီတ လောက ထဲကို တစ်ဖန် ပြန်ရောက်လာ ချိန်မှာ လည်း အမာခံ ပရိသတ် တွေရဲ့ အားပေးမှု တွေနဲ့ သီချင်းတွေ အကောင်းဆုံး ဖန်တီးနေနိုင် သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုဆိုရင် ပျော်ရွှင်စရာ ကောင်းတဲ့ မိသားစု ဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင် ထားပြီး ပရိသတ်တွေအားကျေ နရတဲ့ မိသားစု လေး ဖြစ်ပါတယ်။
သူကတော့ လှုပ်ရှားမှု ပုံရိပ်လေး တွေကို အမြဲဆိုသလို ဖေ့ဘွတ် စာမျက်နှာ ပေါ်တွင် ဖော်ပြလေ့ ရှိတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။အခုလည်း မစ်မစ် လေးရဲ့ တစ်နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ လေးကို အဝေးကနေပဲ ဆုတောင်း ပေးရင်း သမီးလေး ဘေးနား မှာ အတူမရှိ နိုင်တာကြောင့် စိတ်မ ကောင်းဖြစ် မိကြောင်းရေးသား ဖော်ပြ လာပါတယ်။ ” Happy Birthday သမီးငယ် မစ်မစ် လေး သမီးရဲ ပထမဆုံး တစ်နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှာ ပါပါး သမီး နဲ့ အတူရှိမနေ နိုင်တာ sorry ပါနော်။ ပါပါးသမီးလေးကိုအရမ်းလဲလွမ်းတယ်။ အရမ်းလဲချစ်တယ်နော်။ သမီးလေး မေဘုန်းဇာနည် တစ်နှစ်ပြည့်မှ နှစ်ပေါင်းများစွာ မိသားစုနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ။ ကိုယ်ကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာ ပြီး ဘာသာသာသနာအကျိုး လူသား အားလုံးအကျိုးကို ကောင်းမွန်စွာ ထမ်းဆောင် နိုင်ပါစေ လို့ ပါပါးဆုတောင်း ပေးပါတယ် l love you Baby “ဆိုတဲ့စာလေးဖြစ်ရာ ပရိသတ်ကြီး အတွက် ပြန်လည် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ပုဒ်မ ၅၀၅(က)ဖြင့်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံလိုက်ရတဲ့ အဆိုတော် ပိုပို ကို အင်းစိန်ထောင်သို့ပို့လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် HU GO
ဒီကနေ့မှာ ထွက်ရှိ လာတဲ့ပိုင်တံခွန် ထောင်(၇) နှစ်ကျတယ် ဆိုတဲ့ ကောလာဟာလ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြန်လည် ဖြေရှင်း လိုက်တဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့အစ်မ